Inona no ho hita ao amin'ny Extremadura | Vaovao momba ny dia
Extremadura Izy io dia iray amin'ireo vondrom-piarahamonina mahaleo tena ao Espana ary misy faritany roa, Badajoz sy Cáceres. Tany misy tantara an'arivony taona maro izy, araka ny hitan'ny dolmens, sary hosodoko lava-bato ary sampy voatahiry mandraka androany.
Mitondra antsika ireo arivo taona ireo toerana fizahan-tany maro ary kolontsaina tena manankarena, noho izany dia manolotra fitsangatsanganana any Extremadura sy ireo manintona azy izahay anio. Androany ary inona no ho hita ao Extremadura.
2 Inona no hitsidika an'i Extremadura
Izy io dia faritra iray izay dia atsimo andrefan'ny Saikinosy Iberia ary araka ny efa nolazainay teo aloha, izy io dia ahitana faritany roa izay ny kapitaliny no tanàna be mponina indrindra. Miaraka amin'ny toetrandro mafana sy antononyVoatabia, peppers, paraky sy voaloboka no ambolena eto, izay anaovana divay matsiro.
ny Romana nanorim-ponenana teto izy ireo, nanamboatra lalana, tanàna manankarena misy sirosy, tsena ary tranom-panjakana. Merida, ohatra, dia lasa tanàna goavambe sy velona ary manan-karena ara-kolontsaina. Taty aoriana dia hianjera ny empira ary ho tonga ny olona barabariana, anisan'izany ireo Visigoths, nifindra toerana nifandimby ny Saracens amin'ny Moyen Âge.
Este vanim-potoana silamo Tsy nanankarena noho ny Romanina izy ary naharitra taonjato dimy ka hatramin'ny Reconquest, miaraka amin'ny Fanjakan'i León aloha ary ny Fanjakan'i Castile any aoriana. Taorian'ny fampiraisana ireo fanjakana roa ireo dia niray hina koa ireo faritra roa tao Extremadura teo ambanin'ireo satroboninahitra ireo. Ny fiombonan'ny jiosy, kristianina ary ny silamo dia nifarana tamin'ny filaharan'ny mpanjaka katolika fa ny rehetra dia tokony hiova ho kristiana raha tsy horoahina.
Maro amin'ireo mpitsangatsangana Espaniola tonga tany Amerika tamin'ny taonjato faha-XNUMX no avy any Extremadura. Ohatra, Hernan Cortes, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia… Avy eo dia hisy ny fifanoherana anatiny sy ny Ady fahaleovan-tenan'i Espana, ary avy eo am-pelatanany, ny fahoriana sy ny fijaliana ary ny fifindra-monina an-dalam-be handosirana azy ireo.
Inona no hitsidika an'i Extremadura
Rehefa nilaza fa i Extremadura dia manana tantara an-jatony maro, amin'ny fotony dia tsy maintsy miresaka momba ny lova navelan'ireo zato, an'arivony taona maro isika. ny vanim-potoana romana afaka mitsidika ny Merida Roman. Ny rava romanina dia ao amin'ny Plaza Margarita Xirgu ary manokatra varavarankely amin'ny fomba fiaina romanina ao amin'ny saikinosy. izany dia Lova eran-tany ary iray amin'ireo toerana arkeolojika manan-danja indrindra any Espana.
Ny rava romanina dia ao anatin'ny rindrin'ny zanatany: misy teatra, tranon'ny amphitheater sy ny amphitheater, cirque ary basilica. Misy ny Aqueduct of Fahagagana, ny Pórtico del fro, ny Arch of Trajan, ny House of Mitreo ary ny Tempolin'i Diana. Any ivelan'ny rindrina dia misy lakandrano hafa, dia ny San Lázaro, tetezana mamaky ny reniranon'i Guadiana, Rano loharano mafana (18 kilometatra miala an'i Mérida, inoana fa nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX AD, miaraka amin'ireo fonenany), sy tohodrano roa dia i Proserpina sy Cornalvo.
Ity toerana arkeolojika ity dia misokatra manomboka amin'ny volana aprily ka hatramin'ny septambra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 10 hariva ary eo anelanelan'ny Oktobra sy Martsa amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 6:30 hariva. Mitentina 15 euro ny fidirana ho an'ny sety iray manontolo ary 6 euro isaky ny tsangambato. Toerana romana hafa koa ny Rava i Cáparra, kilometatra vitsivitsy miala ny tanànan'i Plasencia. Misy làlana iray arahin'ny mpitsidika ary mitarika azy hamakivaky ny foiben'ny fandikana ny heviny, telo ny vavahady avaratra sy vavahady ary amphiteater. Maimaimpoana ny fidirana.
Miala amin'ny vanim-potoana romanina isika dia miditra ao amin'ny vanim-potoana arabo amin'ny The Alcazaba, ny toeram-ponenan'ireo mpanjaka ny taha hatramin'ny nanombohan'ny Badajoz. Androany ny zavatra hitantsika dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana Almohad, taonjato faha-XNUMX, saingy inoana fa ny fiandohany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Ny Alcazaba dia trano mimanda izay nifehy ny sisintany niaraka tamin'i Portugal koa ary tena lehibe sy mitaky be izy io. Misy varavarana efatra izy io ary afaka miditra amin'ny alalàn'ireny ianao. Ny varavaran'ny Apéndiz sy ny Capitel, izay avy amin'ny vanim-potoana Almohad, dia ampidirina amin'ny varavaran'ny Coraxa sy Yelves.
Misy ihany koa ny tilikambo, miavaka eo afovoany ny Torre de Espantaperros, octagonal. Ao anatiny no misy ny lapan'ny tanànan'i Chester of Roca miaraka amin'ny patio izay miasa ankehitriny ho Museuman'ny Arkeolojia any amin'ny faritany, ny Tilikambon'i Santa María, ny Tilikambon'i Episkopal Palace ary ireo zaridaina.
ny fahitana malalaky ny rindrin'ny La Alcazaba tsara izy ireo. Maimaimpoana ny fidirana ary tsy voampanga ny fidirana. Any amin'ny Cerro de la Muela no misy azy. Any Cáceres no misy ny Monasiteran'ny Guadalupe Izy io dia nalaina avy amin'ny hermitage kely iray izay lasa fiangonana Mudejar teo ambanin'ny fitondran'i Alfonso XI. Ny fiangonana monasitera dia nanana kinova telo ary ny ankehitriny dia amin'ny fomba Gothic. Ny tsangambato dia manana sary sokitra an'ny zanakalahin'i El Greco, Jorge Manuel Theotocópuli.
Tena manana interiors tena tsara izy ary mendrika ny tranombakoka: ny iray ho an'ny amboradara, ny iray hafa ho an'ny hosodoko sy ny sary sokitra ary ny iray kosa ho an'ny boky kely. Misokatra ny monasitera manomboka amin'ny 9 ora sy sasany ka hatramin'ny 30 hariva ary manomboka amin'ny 1:3 ka hatramin'ny 30 hariva. Ny tahan'ny ankapobeny dia 6 euro. Monastera iray hafa mahaliana dia ny Monasiteran'ny Royal Yuste, izay monastic monja toerana izay nandaniany ny androny farany Carlos V. Ny hatsarany dia nanatsara azy fotsiny. Ny monasitera dia ampahany amin'ny National Heritage of Spain. Amin'ny ririnina dia manomboka amin'ny talata ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva, ary amin'ny fahavaratra dia manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 8 hariva. 7 Euros ny fidirana.
Raha miresaka momba ny tontolo voajanahary isika dia anjaran'ny Valan-javaboary Monfragüe, ho an'ireo tia flora sy ornithology. Izy io dia hita ao amin'ny telozoro namboarin'i Plasencia, Navalmoral de la Mata, ary Trujillo. Ny Reniranon'i Tagus no andry ao aminy ary ny UNESCO no nanambara ny zaridaina Fitahiry biosialy.
Ao amin'ireny tandavan-tendrombohitra ireny dia misy ny fitahirizana, renirano, vatolampy, ala ary ala izay toerana honenana mety indrindra ho an'ny a zavamaniry sy biby maro karazana. Vorona isan-karazany, vano mainty, voromahery, voromahery ary biby toy ny bibidia, serfa, otter ...
Ao anatin'ny valan-javaboary no misy ny tranon'ny Monfragüe, Arabo, nonenan'i Princess Noeima tamin'izany fotoana izany, araka ny angano nifankatia tamina Kristiana ka voasazy. Misy koa ny tanànan'i Villarreal de San Carlos, izay ahafahanao mijanona, misakafo ary mitsidika ivon-toeram-pizahan-tany mba hahazoana vaovao momba ilay faritra. Misy zotram-pifandraisana izay mitondra anao mamaky ny valan-javaboary ary indrindra mankany amin'ny riandrano Gitano, hantsam-bato 300 metatra ambonin'ny Ony Tagus. Izany hatsaran-tarehy izany!
Toerana hafa hanaovana Trekking ary ny fidirana amin'ny dobo voajanahary dia mety ho ny meander an'ny Melero. ny Tsangambato voajanahary Los BarruecosAo Cáceres dia hahita toerana feno vato mahavariana misy dobo sy domes ianao. ny Orellana Beach Izy io dia ny morontsiraky ny fitahirizam-bokatra mitovy anarana aminy, ao Orellana la Vieja, any Badajoz.
Izany dia morontsiraka saina manga ary morontsiraka anaty. Fantatra amin'ny anarana hoe Playa Costa Dulce koa izany ary afaka manao fanatanjahantena anaty rano isan-karazany ianao. Eo amoron'ny renirano iray hafa, ny reservoir Gabriel y Galán, fa any Cáceres, no Kompana ara-tantara Granadilla.
A tanàna naorin'ny silamo tamin'ny taonjato faha-XNUMX, rindrina, ary eo am-pamerenana amin'ny laoniny mba ho lasa fizahan-tany ara-kolontsaina. Izy io dia mitahiry ny rindrin'ny Almohad, ny trano mimanda dia nivadika ho tranon'ny Kristiana, ny tranon'ireo olona manan-danja, indraindray tany am-boalohany, ary ny fiangonana paroasy tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Miaraka amin'ity lisitra fohy ity ny zavatra ho hita ao Extremadura tsy lavorary isika. Ary i Extremadura dia vondrom-piarahamonina midadasika tokoa, tsy afaka mandeha manerana raha manana andro vitsivitsy ianao. Raha izany no anao, tendro farany, hampifantohana ny toerana sy ny hevitra: Tsy azo ekena i Mérida sy i Cáceres, i Badajoz koa, fa ankoatry ny ampianay, raha mila zavatra mangina kokoa noho ireo tanàna ireo ianao, mankanesa any amin'ireo tanàna. Any ianao tena afaka miala sasatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Inona no ho hita ao Extremadura